कोभिड संक्रमितको उपचारमा सक्रिय डा अनुप बास्तोलाले कसरी मनाउँदै छन् दसैँ? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोभिड संक्रमितको उपचारमा सक्रिय डा अनुप बास्तोलाले कसरी मनाउँदै छन् दसैँ?
‘अस्पतालको सेवा र विकास मेरो पहिलो प्राथमिकता हो’
कमला गुरुङ बिहीबार, असोज २८, २०७८, ०९:४७:००
काठमाडौं - दसैँमा अधिकांशको योजना हुन्छ, घुमफिर गर्ने, आफन्तकोमा जाने र ठूला बडाको हातबाट टिका र आर्शिवाद थाप्ने। तर सबैलाई यो मौका कहाँ मिल्ने रहेछ र !
केहीलाई यो चाडपर्व र रमझमले नछुने रहेछ। जसमध्ये एक हुन्, डा अनुप बास्तोला। डा बास्तोला कोरोनाविरुद्धको लडार्इंमा होमिएका एक योद्धा हुन्।
उनको अधिकांश समय अहिले पनि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै बित्ने गर्छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा होस् या प्रशासनिक काममा उनी दुवैमा उत्तिकै सक्रिय छन्।
अस्पतालको निर्देशक भएपछि उनलाई बिरामीको उपचारसँगै अस्पतालको प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।
कोरोना संक्रमितलाई निको बनाएर घर फर्काउन उनी दिनरात नभनी खटिरहे। नेपालमा भेटिएका पहिलो संक्रमितको उपचारदेखि अहिलेसम्म उनी सक्रिय छन्। अझ भनौं, कोरोना विरुद्धको यो लडाईंमा उनको सक्रियता झनै बढेको छ।
दसैँको रमझम छ। तर डा बास्तोलालाई न त दसैँको रमझमले छोयो न त तिहारको रौनकले नै। उनी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति अहिले पनि उत्तिकै तल्लीन छन्। दसैँमा पनि बिरामीको उपचार र काममा खटिने उनको योजना छ।
उनी भन्छन्, ‘मेरो पहिला र अहिलेको भूमिका फरक छ। बिरामीको उपचारसँगै म अस्पतालको काममा पनि व्यस्त छु। त्यसैले दसैँभन्दा पनि यी कामहरु मेरो मुख्य प्राथमिकतामा छ।’
दसैंको रमाइलो भन्दा पनि अस्पतालको काम उनको पहिलो प्राथमिकतामा छन्। हाल तीन वटा काम उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।
पहिलो, ‘सेवालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने’
दोस्रो, ‘यथास्थानमा तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउने’
तेस्रो, ‘टिचिङ, लर्निङ्गका क्रियाकलापहरु अघि बढाउने’
सुरुवाती दिनमा तीन सय शय्याको अस्पताल फरक ठाउँमा बनाउने कुरा थियो। तर निर्देशक डा बास्तोलाले यथास्थानमै तीन सय शय्याको अस्पतालको भवन बनाउने योजना अघि सारेका छन्। यथास्थानमै नयाँ भवन बनाउँदा बिरामीलाई सहज हुने उनले बताए।
अस्पतलामा हाल तीन सय बढी कर्मचारीहरु छन्। दसैँमा ती सबैको ड्युटी पनि उनलाई मिलाउनुपर्नेछ। उनका अनुसार दसैँमा अस्पतालको सेवालाई असर नपर्ने गरी कर्मचारीहरुको ड्युटी मिलाइएको छ। दसैँमा कुनै पनि सेवा नरोकिने उनले बताए। गत वर्ष पनि उनले दसैँ मनाउन पाएका थिएनन्। यो वर्ष पनि टिका थाप्न मात्र घर जाने उनको योजना छ। हुन त घर यही काठमाडौंमै भएकाले पनि उनलाई केही सहज भने भएको छ।
चाडपर्वमा पनि अस्तपालमा बस्नुपर्दा मन खल्लो हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यो अस्पताललाई अघि बढाउने मेरो सपना छ। मैले बुनेका सपनाहरु पुरा गर्नुपर्नेछ। यही बसेर प्रोफेसर भएर पढाउने हो। तीन सय शय्या, टिचिङ, लर्निङ्ग क्रियाकपाल र बिरामीको सेवा गर्ने मेरो सपना हो।’
२०६३ सालमा लोकसेवा पास गरेका उनले पहिलो जागिर दार्चुलाबाट सुरु गरेका हुन्। त्यसपछि आठौँ तह मेडिकल अधिकृतका रुपमा २००८ मा उनी शुक्रराज अस्पतालमा आए। यो अस्पतालमा काम गरेको १४ वर्ष पुग्न लागेको छ। यो अस्पतालमा काम गर्ने, अस्पतालको विकास गर्ने उनको ठूलो सपना छ।
चाडपर्वको बेला पनि उनी अस्पतालको सेवालाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर योजनाहरु बनिरहेका छन्। अस्पतालको टिकट काउन्टरलाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने उनको योजना छ। टिकट काउन्टर सानो हुँदा बिरामीको भीड र लाइन धेरै हुने गरेको उनले बताए। भीड र लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन नै काउन्टरको सेवा परिमार्जन गर्ने उनले बताए। यो सँगै क्यान्टिनको व्यवस्थापन गर्न पनि उनी लागेका छन्।
‘बिरामीहरु टिकट काउन्टरमा उभिरहेका हुन्छन्। बस्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसैले काउन्टरलाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन तर्फ लागिरहेको छ।’ उनले भने।
दसैँ मनाउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न उनको आग्रह छ। कोरोना संक्रमितको संख्या केही घटेपनि जोखिम कायमै रहेकाले मास्क लगाउने, हात सफा गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दसैँ मनाउन उनको सुझाव छ।
‘कोरोनाको संक्रमणबाट परिवारको जोगाउन सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसको लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना अनिवार्य छ। परिवारका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले धेरै भीडभाड नगरी मापदण्ड पालना गरेर मात्र दशै मनाउन मेरो आग्रह छ’ उनले भने।